787-800 Mega fonosana olana.
fanontaniana 787-800 Mega fonosana olana.
1 taona 8 volana lasa izay #632 by ricsmi
Miarahaba rehetra, vao tsy ela akory aho vao nanomboka nilalao FSX SE, ary tena nankafy azy io.
Aho vao nametraka ny TDS 787-800 Mega fonosana sy ny olana ihany aho miaraka izany fa tsy misy ny cockpit bokotra sy ny kiboriny miasa any VC, dia manidina rehetra amin'ny fiaramanidina mandritra ny VC ary izany no mamono fiaramanidina ho ahy izany araka izay tsy haharitra ny 2d cockpit.
Any hevitra ry zalahy?
1 taona 8 volana lasa izay #633 by Gh0stRider203
tsara satria misy maotera 2 vorona, raha ny marina aho, fantatro ny VC azonao ampiasaina. ianao no mila manampy misintona fanampiny fiaramanidina, nefa ho very maina izany Ho
izany hasehoko anao ny fomba swap ny VC
ny VC ao fa izy no mahafinaritra. Tsy tena mampiasa izany nefa Functional
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: ricsmi
1 taona 8 volana lasa izay #634 by ricsmi
Ok misaotra aho hijery, nahazo olana iray hafa, i nahamarika fotsiny fa amin'ny fijery ivelany misy pusher kamiao lehibe mifamatotra amin'ny fiaramanidina.
Ahoana no fomba manala ny izany na tsy izany toa adaladala sy marina clip dans amin'ny lalana mankany amin'ny toerana misy anao ny iray.
1 taona 8 volana lasa izay #635 by Gh0stRider203
aloha ny VC, ankehitriny stowaways? toa toy ny tsy afaka hahatratra ny aina! TPT
fa tsy azoko antoka ny momba, ny marina. Tsy manidina ny 787 (ny 772LR manana fahaizana tsara kokoa sy isan-karazany). Hany zavatra azoko soso-kevitra dia Jereo ao kobany mba hahitana raha misy utility varavarankely. Fantatro ny sasany amin'ireo tetikasa Open Sky voro-manidina manana izany.
1 taona 8 volana lasa izay #640 by ricsmi
Rehefa avy namaky ny alalan 'ny mamaky ahy izany hoy misy Utility tontonana izay afaka miala eny an-kijanona, ny tontonana heverina fa mampiseho rehefa maika Ctrl + 7 fa isnt miasa na.
Any hevitra gents?